Hlaziya imfuno yomsebenzi: yintoni kunye nendlela enokwenziwa ngayo | Ezezimali
Hlaziya isicelo somsebenzi
Enye yeenkqubo ekufuneka uzenzile xa ubhalisile kwi "ntswela-ngqesho", oko kukuthi, ubhalisiwe kwii-ofisi ze-INEM, SAE, SEPE ... Oko kukuthi, qinisekisa ukuba imeko yakho ayitshintshanga kwaye awusaphangeli, kunye nokukhangela umsebenzi.
Oku kubonakala kulula kakhulu, isenokungabi njalo, ngakumbi ukuba uyaqala ukubhalisa. Kodwa iba yinkqubo ebaluleke kakhulu, ngakumbi ukuba uqokelela isibonelelo sokungabikho kwemisebenzi kuba ukuba awuhlaziyi, ungaphetha uphulukana nesibonelelo. Ke ngoku siza kukunceda uqonde kuthetha ukuthini ukuvuselela ibango lomsebenzi kwaye ungayenza njani ngokukhawuleza (kuba zininzi iindlela zokwenza oku).
1 Ikhadi lokungaphangeli, ingaba budibana njani nokuhlaziywa kwemfuno yomsebenzi?
2 Usihlaziya njani isicelo sakho somsebenzi
2.1 Eofisini ngobuqu
2.2 Hlaziya imfuno ekwi-Intanethi
2.3 Ungayihlaziya ngefowuni?
Ikhadi lokungaphangeli, ingaba budibana njani nokuhlaziywa kwemfuno yomsebenzi?
Xa ungasebenzi, enye yeenkqubo ekufuneka uzenzile kukuya kwi-ofisi yengqesho ukuze ubhalise "njengongasebenziyo". Oko kukuthi, njengomntu owayengenamsebenzi ngelo xesha. Kuxhomekeke ekubeni ubukhe wanomsebenzi wangaphambili, kwaye unexesha elingakanani, unokuba nelungelo lokufumana isibonelelo sokungaphangeli onokusiqokelela inyanga nenyanga, uhlobo loncedo ukuze ukwazi ukutsala ngelixa ufumana umsebenzi omtsha.
Kolo tyelelo lokuqala, baya kukunika into ebizwa ngokuba "likhadi lokungaphangeli." Olu luxwebhu olusekelisa idatha yakho kunye nemeko yokuba awusebenzi kodwa ufuna umsebenzi. Ke, ungena kuluhlu, kungekuphela kuloo ofisi, kodwa kubo bonke abasesixekweni, ukuze, ukuba isithembiso somsebenzi sifike apho iprofayile yakho ingena khona, baya kukunika ithuba lokuzibonakalisa kwaye, mhlawumbi, ukhethe ngenxa yokuba bekuqesha.
Ngoku, Eli khadi alinamkhawulo ngexesha, linikwa kuphela malunga neenyanga ezi-2-3. Kwenzeka ntoni xa kudlula ezo nyanga? Ewe, kuya kufuneka uhlaziye isicelo sakho. Ngamanye amagama, kuya kufuneka uye e-ofisini kwaye uxele ukuba ukwimeko efanayo nale xa kuveliswa uxwebhu, ngohlobo lokuba batshintshe umhla kwezi nyanga zilandelayo.
Kodwa ngaba inokuhlaziywa kuphela ngoluhlobo? Kwixesha elidlulileyo, ewe, kuba yayiyindlela yokuqinisekisa ukuba umntu akaphangeli okanye hayi (ukunqanda ukusebenza kwi-B, ukusebenza ngaphandle kwesivumelwano ...). Nangona kunjalo, ngoku kukho iindlela ezininzi zokuhlaziya imfuno yomsebenzi engabandakanyi ukuya emntwini. Kwaye ngabo esiza kuthetha ngabo ngokulandelayo.
Usihlaziya njani isicelo sakho somsebenzi
Ikhadi lokungaphangeli, okanye igama "elisemthethweni", uXwebhu loVuselelo lweMfuno (DARDE), inoluhlu lolwazi olubalulekileyo ekufuneka uyazi. Ngaphandle kwedatha yakho yobuqu kunye neemeko ezimiselweyo kuyo, kukho imihla emibini ephambili: kwelinye icala, umhla obhalise ngawo kwiofisi yengqesho njengomntu ofuna umsebenzi; kwelinye icala, umhla oya kuluhlaziya ngalo olo xwebhu. Ngamanye amagama, umhla omele ukuya kuwo ukwimeko efanayo.
Ungathini ukuba akunjalo? Ewe, unokukuphepha ukuya okanye ukuvuselela isicelo somsebenzi, uphulukane nawo onke amandla obekwazi ukuwaqokelela.
Ngoku, xa kuvuselelwa isicelo somsebenzi, kufuneka kuthathelwe ingqalelo ukuba, ngamanye amaxesha, umhla abaya kusinika wona inokuba lusuku lokungabinamsebenzi, oko kukuthi, ngoMgqibelo, ngeCawa okanye ngeholide, okuthetha ukuba iiofisi ivaliwe (nakwi-intanethi) kwaye oko akunakwenziwa. Kwezo meko, kuvunyelwe ukuvuselela, nokuba kukanye okanye iintsuku ezimbini ngaphambili, okanye usuku olunye okanye ezimbini kamva.
Kodwa ihlaziywa njani? Okwangoku, uneendlela ezintathu zokwenza:
Sihamba nokwenzeka kokuqala, eyona leyo ibandakanya ukushiya ikhaya uye kwiofisi yengqesho. Ngokwesiqhelo kuyacetyiswa ukuba uye kwi-ofisi yengqesho apho ubhalise khona kwaye iyahambelana nawe ukuze upase "uphononongo". Nangona kunjalo, kwinyani Ungaluhlaziya uxwebhu kuyo nayiphi na iofisi eSpain Kuba, ukuba bayakubuza ukuba kutheni uhlaziyela apho hayi kwenye indawo, ungabaxelela ukuba kungenxa yokuba ubusenza udliwanondlebe lomsebenzi okanye ujonge abafowunelwa ukuze ufumane umsebenzi.
Kuya kufuneka ukhumbule ukuba ishedyuli isekiwe eya kuxhomekeka kule ofisi. Ukongeza, kwezinye iiofisi, baneeyure ezithile zokuvuselela isicelo somsebenzi, ke kuyacetyiswa ukuba wazise kakuhle ngaphambi kokuba uye kumhlangano kuba, ukuba awunako ukuwuhlaziya, ungafumana isohlwayo.
Kule meko, akukho mfuneko yokwenza idinga kwangaphambili, enyanisweni, kuya kufuneka uye kuloo ndawo ulinde ithuba lakho njengaye nawuphi na umntu okhoyo.
Ngokumalunga nokutywinwa kwebango, kuya kufuneka ukhumbule ukuba:
Isicelo somsebenzi asinakuhlaziywa ngaphambi komhla. Ngamatyala athile kuphela anokukuqonda, njengokuqeshwa ngonyango, ukusebenza, njl.
Isicelo somsebenzi asinakuhlaziywa emva komhla. Ngokwenyani, ezinye iiofisi "zinobuhlobo" ngakumbi kwaye ukuba uphoswe ziintsuku ezi-1-2, banako "ukujonga ngamehlo", kwaye bahlaziye. Kodwa kuya kufuneka uqonde ukuba kunokubakho iziphumo zokungayenzi ngexesha. Ezi zohlwayo zinento yokwenza nesibonelelo sokungaqeshwa, oko kukuthi, isibonelelo esincedisayo okanye isibonelelo sokungaphangeli. Ukuba uyalibala ukuvuselela isicelo sakho somsebenzi, isohlwayo sokuqala kukuthatha inyanga kwisibonelelo. Ukuba ulibale kabini, uya kuyeka ukutshaja iinyanga ezi-3; kwaye ukuba lixesha lesithathu, iinyanga ezintandathu. Ukuba, nangona kunjalo, unegunya lokujonga kwakhona, uphelelwa ziinzuzo.
Hlaziya imfuno ekwi-Intanethi
Olunye ukhetho kufuneka uvuselele isicelo sakho somsebenzi nge-Intanethi. Kuya kufuneka ukhumbule ukuba uLuntu ngalunye oluzimeleyo lunephepha lalo leofisi yengqesho. Kuyo, kuya kufuneka ujonge into efana ne "ofisi ebonakalayo", "isicelo sam somsebenzi", njalo njalo.
Kwaye yenziwa njani? Ewe, ukuqala, Kuya kufuneka uyazi ukuba unayo imini yonke yokuhlaziya kwakho ukuze uyenze, Oko kukuthi, ukusuka ngo-0: 00 kusasa ngaloo mini de kube ngu-23: 59 pm Okushiya umgama ongaphezulu kobuso ngobuso. Kwaye akukho mfuneko yokuba ubekho kwindawo ethile, kodwa ungasitampu naphi na eSpain (nangaphandle) kuba ufuna i-Intanethi kuphela.
Nje ukuba utywine, Kukulungele ukugcina uxwebhu ngePDF bubungqina bokuba uwuhlaziyile (Kwaye ngendlela, uya kufumana nomhla wakho omtsha wokuhlaziya).
Kwakhona, ukuba ucinga ukuba udinga isatifikethi sedigital okanye i-ID esebenzayo ye-elektroniki, uyaphazama, akuyomfuneko, kodwa kufuneka ube neAcrobat Reader okanye efanayo ukufumana iPDF.
Ukuba uyazibuza ukuba ungaphinda usihlaziye isicelo sakho somsebenzi ngefowuni, impendulo ngu-ewe. Kodwa hayi kulo lonke elaseSpain.
Uluntu kuphela lweZiqithi zeCanary, iNavarra kunye neBalearic Islands ziyakuvumela oko. Ukwenza oku, benze ukuba inombolo yenombolo yomnxeba eyi-012 apho benza le nkqubo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Uqoqosho ngokubanzi » Ngqesho » Hlaziya isicelo somsebenzi
UAndy Diaz sitsho
Ngaphandle kwamathandabuzo, ingqesho ibalulekile, ukubonelela ngeyona meko ibalaseleyo kubasebenzi bethu ivelisa imeko efanelekileyo yomsebenzi.
Phendula kuAndy Diaz
Bhalisa njengomntu ofuna umsebenzi